Indida kaFermi. Yazi isixazululo esingaba khona kanye nokuba khona kwempilo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isikhathi esingaphezu kwesisodwa uke wacabanga ukuthi ngabe iplanethi yethu ukuphela kwayo hhayi kuphela i- Uhlelo lomkhathi okuhlala abantu, kodwa ukuphela kwayo yonke indawo. Ngokunokwenzeka iplanethi ingahlalwa uma ihlangabezana nezimo ezithile eziyivumela ukuthi ithuthukise impilo. Kodwa-ke, akunakwenzeka yini ukuthi kube khona enye iplanethi ehlangabezana nezimo ezinhle? Ukuze kube nokuphila kwiplanethi akudingeki nje kuphela ukuthi kube khona amanzi angamanzi. Siyazi ukuthi kunamaplanethi lapho kunamanzi khona, kepha awekho endaweni ebizwa ngokuthi "indawo yokuhlala" ngakho-ke, impilo ayikaze yathuthuka. Uma kunamathuba amaningi okuthola impilo kwamanye amaplanethi njenge- Indida kaFermiKungani singakayitholi okwamanje?
Kule ndatshana sizokuchazela ukuthi iyini indida kaFermi nokuthi izama ukusichazela ini. Ngabe kungaba khona ukuphila kuyo yonke indawo kwenye iplanethi? Sikutshela konke.
1 Yini indida kaFermi?
2 Ubuchwepheshe nebanga: imikhawulo emibili
3 Sinjani impucuko?
4 Ukuphi wonke umuntu?
Yini indida kaFermi?
Indida kaFermi ukuphikisana phakathi kwesayensi yemfundiso kanye nokuhlola. Ngokusho kososayensi, kunezigidi zamathuba okuthola impilo ehlakaniphile kwenye iplanethi Kuwo wonke umhlaba, kepha kuze kube namuhla, awukakahlangabezani nalutho noma omunye umuntu.
Namuhla, usosayensi ogama lakhe linguBerezin unikeze incazelo entsha ngalo mbono futhi uthole isisombululo kulendida kaFermi. Kodwa-ke, lesi sixazululo akulula ukusicabanga, ngoba mhlawumbe akusiwo umphumela ofuna ukuwuzwa. Ngokusho kukaBerezin, umuntu akasoze athola enye impucuko ehlakaniphile. Sizoqhubeka nokuguquka njengomjaho kanye ne IPlanethi yoMhlaba iyoyeka ukuhlala noma inyamalale ngaphambi kokuba kutholakale enye impucuko. Lokhu kungenxa yokubhujiswa okuseduze kwenkanyezi yethu, iLanga.
Akunandaba ukuthi hlobo luni lwempucuko olukhona laphaya e-Universe. Uma kuyizinto ezihlakaniphile, zisebenzisa imishini engaphezulu kweyethu, uma kungamaplanethi anokuhlakanipha okuhlangene, njll. Akukhathalekile konke lokhu. Ukuphela kwento ebalulekile ukuthi impucuko okufanele siyithole iseduze "nokuvalwa" nokusebenziseka komuntu. Yize indida kaFermi isho ukuthi, ngokwezibalo, kunamathuba amakhulu okuthola impilo kwenye iplanethi, kuze kube namuhla lokhu bekungenzeki.
Ubuchwepheshe nebanga: imikhawulo emibili
Akusizi ngalutho uma kunemiphakathi eyehlukile kithina uma ubuchwepheshe, obakho nobethu, abwenele ukumboza amabanga aphakathi kwamaplanethi. Indida ichazwa yisibonelo sokuthi isihlahla esiphakathi kwehlathi iyawa futhi ayibangi msindo ngoba akekho noyedwa ongayizwa. Umsindo nomsindo zikhona kuphela ngoba kukhona umuntu ozizwayo. Kunjalo nangenye impucuko. Kungaba nezinkulungwane zemiphakathi kuyo yonke indawo, kepha ngasikhathi sinye ngeke zibe khona ngathi ngoba asisoze sakwazi ukuzibona.
Ake sithi umjaho onobuhlakani uyakwazi ukuthuthuka uze ufike ezingeni lokukwazi ukuhamba phakathi kwamaplanethi, kepha maphakathi nendlela yawo uyakwazi ukusula umkhondo wenye impilo ngaphambi kokuwuthola. Kungasikhawulela futhi uma kukhulunywa ngokuthola enye impucuko.
Asikhulumi ukuthi izimpi, ukunqoba noma ukuxhashazwa kwezinsizakusebenza kuyizizathu zokuthi umjaho uzophela, kepha ukuthi kungukuqothulwa kohlanga okuphelele, okwenzeka ngokushesha kepha akuhleliwe. Ukuze iqondakale kahle ngesibonelo: njalo lapho umuntu akha isakhiwo, kungenzeka ukuthi inqubo yokwakha phansi bhubhisa yonke intuthwane nabo bonke abantu abebehlala kuyo. Ngokusobala, akwenziwa ngamabomu noma ngobubi, kepha ngenxa yomehluko wemibono phakathi kwabantu nezintuthwane, besingazi nokuthi kukhona lapho.
Asicabangi ukuthi izintuthwane ziyizinhlobo esingahlanganyela ngazo ezingxoxweni nasekwenzeni izingxoxo. Okufanayo kungenzeka nangezinye izinhlobo zezinto eziphilayo noma impucuko eMkhathini.
Kuleli qophelo yilapho sicabanga ukuthi, uma senze isibonelo sentuthwane, ingabe siyizintuthwane zezinye izinhlanga? Ukuze sichaze iphrofayili yethu njengomjaho, kufanele sisebenzise umthetho we-anthropic. Ukuthi noma yimuphi umbono ngobukhona bempilo eMkhathini kumele ivumele abantu ukuthi babekhona njengohlanga. Lokhu kungenxa yokwakheka kwethu okususelwa kukhabhoni kanye nokuba khona kwawo ezindaweni eziningi ezithile zoMkhathi.
Ngalesi simiso se-anthropic, sizobe sinikeza isisombululo kulendida kaFermi. Kusho-ke ukuthi ukuphela kwesixazululo esinaso ukuthi siyizintuthwane zezinye izinhlobo noma ezinye izinhlobo zempucuko kuyo yonke indawo. Uma amathuba okuphila ephezulu kakhulu futhi singakatholi, okuwukuphela kwencazelo ukuthi, kubo, asibonakali noma asibalulekile.
Futhi sithola okuphambene. Singabokuqala ukufika sidlule isihlungi esikhulu futhi, ngakho-ke, sizoba ngabokugcina ukuhamba, siphinde sibe ababhubhisi bezinye izimpucuko.
Ukuphi wonke umuntu?
Kusukela indida kaFermi ayinaso isixazululo esisebenzayo, singanikela ngokuqagela okuthile. ILanga lethu lisencane kakhulu ngeminyaka kune-Universe ngemuva kokudalwa kwayo ku- Big Bang. Ngakho-ke, kungalinganiselwa ukuthi kufanele kube khona amaplanethi anendawo ngaphakathi kwendawo yokuhlala yenkanyezi yawo ehambisanayo futhi impucuko yayo yathuthuka ngaphambi kwethu.
Uma kunjalo, ubuchwepheshe babo bukwazile ukuthuthukisa okuningi kakhulu kunokwethu kepha, yize lokhu bekungenzeka, abakakwazi ukunqoba ibanga elihlukanisayo. Cabanga ukuthi uma ubuchwepheshe bungathuthukiswa kuze kube seqophelweni lokuthi sikwazi ukusebenzisa wonke amandla eplanethi, bese sisebenzisa leyo yeLanga ngokuphelele futhi nangaphezulu ukuze sisebenzise amandla eMilky Way, singanweba eMkhathini size sifinyelele ezingeni lokuthola impucuko entsha noma ichithe abanye abaningi. Kungenzeka okufanayo nakithi.
Ngiyethemba lolu lwazi lukusizile ukuthi ucacise lolu daba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Indida kaFermi